Isishwankathelo seChina kunye neempawu zeevalve zolawulo lokuhamba kunye noMthengisi | Guorui
Impompo gear ngamanzi
valve ngokwenani leevoti
Amagqabantshintshi kunye neempawu zokuhamba kwezivalo
Ivalve yolawulo lokuhamba yivalve exhomekeke ekutshintsheni ukunganyangeki kolwelo lwe-orifice ukulawula ukuhamba kwe-orifice phantsi komehluko othile woxinzelelo, ngaloo ndlela uhlengahlengisa isantya sokuhamba kwe-actuator (isilinda-hydraulic okanye i-hydraulic motor). Ngokukodwa ibandakanya ivalve yokujija, isivalo sokulawula isantya, ivelufa yokuhambisa okungaphezulu kunye nevalve yokuqokelela idivista. Ifom yokufakela ufakelo oluthe tyaba. Indlela yoqhagamshelo yahlulwe yohlobo lwe-flange kunye nohlobo lomsonto; uhlobo welding. Iindlela zolawulo kunye nohlengahlengiso zahlulwe zazenzekelayo kwaye zenziwa ngesandla.
Ivalve yolawulo lokuhamba, ekwabizwa ngokuba yi-400X yokuhamba kolawulo lwevalve, yivelufa yemisebenzi emininzi esebenzisa indlela yokuqhuba ngokuchane kakhulu yokulawula ukuhamba.
1. Utshintsho kumgaqo wokunciphisa indawo yokuchithwa kwamanzi ngokusebenzisa isitya se-orifice okanye i-valve yokuqhaqhafaza, usebenzisa i-valves ezihambelanayo zokunciphisa ukulahleka kwamandla kwinkqubo yokugubha
2.Ukulawulwa kokuziva okuphezulu, ukhuseleko kunye nokuthembeka, ukulungisa ingxaki ngokulula kunye nobomi benkonzo ende.
Ivalve yolawulo lokuhamba inokufikelela ngokuzenzekelayo ukulingana kwenkqubo ngaphandle konikezelo lwangaphandle lwamandla. Ukuhamba kunqunyelwe ngokugcina umahluko woxinzelelo phakathi ngaphambili nangasemva kwe-orifice (indawo esisigxina) rhoqo, ke oko kunokubizwa ngokuba yivalve yokuhamba rhoqo.
Into yevalve yokuhamba rhoqo yokuhamba, enokutshixa isixa samanzi esihamba ngevalve, hayi ibhalansi yokumelana. Unokuyicombulula ingxaki yokungalingani okuguqukayo kwenkqubo: ukugcina ukusebenza ngokukuko kwesikhenkcezisi esinye, ibhoyila, inqaba yokupholisa, indawo yokufudumeza ubushushu, njl., Kuyimfuneko ukulawula ukuhamba kwezi zixhobo ukuba zilungiswe ixabiso elilinganisiweyo; ukusukela esiphelweni senkqubo, ukunqanda Impembelelo efanayo yohlengahlengiso olunamandla ikwafuna ukuthintela ukuhamba kwesixhobo okanye isebe.
Ingxaki ekufuneka ihlawulwe kuyilo, ukungalunganga kwevalve yolawulo lokuhamba kwemali kukuba ivelufa inemilinganiselo emincinci yokusebenza umahluko. Iimveliso ngokubanzi zifuna umahluko ophantsi wokusebenza koxinzelelo lwe-20KPa. Ukuba ifakwe kwisekethe engathandekiyo, ngokuqinisekileyo iya kufuna impompo yokujikeleza kwamanzi ukuba inyuke ngeemitha ezi-2 zekholamu yamanzi. Intloko esebenzayo kufuneka ifakwe kwisiphelo esikufutshane kwaye ingakhululekanga esiphelweni esikude. Sukuyifaka le valve yokuhamba xa umsebenzisi engekho kumthombo wobushushu ngaphezulu kwe-80% yereyitha yokufudumeza.
Uhlalutyo ukusilela eqhelekileyo hydraulic ...
Ukuhlelwa kwezivalo zombane
Umahluko phakathi kwe sys hydraulic evulekileyo ...
Ubungakanani bemakethi ye-anhydride ye-Trimellitic, jikelele ...
grhr@grhcn.com （Ailee usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows